Why you should use ERP Software – it4a
Why you should use ERP Software
“ERP Software ကို အသုံးပြုသင့်သော အကြောင်းရင်း (6) ချက်”
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှိ ဌာနများမှ များပြားလှသော Data Source တွေ၊ Information တွေကြောင့် လုပ်ငန်းတွင်း အချိတ်အဆက်မမိဖြစ်ကာ ကသောင်းကနင်းဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ ERP softwarer အသုံးပြုသင့်နေပါပြီ။
ဂိုထောင်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းလက်ကျန် အရေအတွက်အတိအကျကို အရောင်းသမားများဆီသို့ အချိန်မှီမရောက်ရှိခဲ့ပါက လက်ကျန်ကုန်ပစ္စည်းများ ထပ်ပိုမိုကာ ရောင်းချမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့မှားယွင်းမှုများက Customer များနှင့်ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပင် ဝန်ထမ်းဦးရေများပြားသော လုပ်ငန်းများတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီး၏ ခွင့်ရက်များ၊ ရုံးတက် ရုံးဆင်းချိန်များ၊ လစာပေးခြင်းများနှင့် ပတ်သတ်သောကိစ္စများတွင် လူအင်အားသုံး၍ တွက်ချက်ပေးရပါတယ်။ HR ဝန်ထမ်းတွေဟာ လစဉ် ဒီအချက်အလက်တွေကို တစ်ခုချင်းဝင်ကြည့်ပြီး လစာတွက်ချက်ခြင်းမျိုးကို အချိန်အမြောက်အများ အသုံးပြုနေရခြင်းက မလိုအပ်ဘဲအချိန်ကုန်လူပင်ပန်းဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီပြဿနာတွေအကုန်လုံးအတွက်အဖြေကတော့ ERP Software ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ERP Software ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်
Data များကိုအသေးစိတ်စာရင်းသွင်းရခြင်းများ၊ တူညီသော data များကို ထပ်ခါထပ်ခါစာရင်းသွင်းရခြင်းကို လျော့ချပြီးသားဖြစ်စေခြင်း၊
2. Reduce Resources
ဝန်ထမ်း ၁၀ယောက်လောက်အသုံးပြု၍ လုပ်ကိုင်ရသောလုပ်ငန်းများတွင် Software အစားထိုးအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းအင်အားကို အလဟဿမဖြစ်စေဘဲ အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ခြင်း၊
ဝန်ထမ်းအင်အားအနည်းငယ်ဖြင့်သာ Software များကိုအသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းကြောင့် Human Error များလျော့နည်းလာခြင်း၊
လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများက အချိန်နှင့်တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊
5. High Performances
လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန် အချိန်တိုတိုအတွင်း ရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့် တူညီသောလုပ်ငန်းကိုပင် လူအင်အားအနည်းငယ်ဖြင့် အချိန်တိုတိုအတွင်း ပြီးမြှောက်စေခြင်း၊
6. Increase in Operational Efficiency
ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်း ပရော့ဂျက်များကို ပိုမိုအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေပါတယ်။
ဒီလို လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ it4aမှ ERP Software က လူကြီးမင်းတို့နဲ့ အမြဲအတူရှိနေပါတယ်။
« လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းရဲ့ များပြားလှသော Data အရင်းအမြစ်တွေကြားမှာ ခေါင်းရှုပ်နေရပြီလား 𝗘𝗥𝗣 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 သုံးသင့်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအကြောင်း Part (1) »